ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်ချက်များ
နေပြည်တော်တွင် အော်တိုတယ်လီဖုန်း၊ ဒေတာနှင့်ကေဘယ်လ်တီဗွီကွန်ယက်များ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် (၂၀၀၅-၂၀၀၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း (၁.၄.၂၀၀၅)မှ (၆.၄.၂၀၀၅)နေ့အထိ အသေးစိတ်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
အော်တိုတယ်လီဖုန်းစနစ်ကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ရုံး(၃၈)ရုံးနှင့် အိမ်ရာ(၁၀၀)လုံးတို့ အတွက် ပင်မအိတ်ချိန်းလိုင်း (၂၀၀၀) နှင့် လိုင်း(၅၀၀)ပါ Remote Switch Unit RSU (၁၆)လုံး စုစုပေါင်း လိုင်း(၁၀,၀၀၀) ဖြင့် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ (၁.၁၀.၂၀၀၅)ရက်နေ့တွင် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ နေပြည်တော်(ပင်မ) S-12 အိတ်ချိန်းရုံး ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအကွက်(၁,၂)၊ မြို့မစျေး၊ ပင်မ အိတ်ချိန်း၊ ပိတောက်အိမ်ရာ၊ လူပျိုဆောင်၊ အပျိုဆောင်၊ ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံ၊ ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ်မှအမရဟိုတယ်တို့တွင်တယ်လီဖုန်း၊ ဒေတာနှင့်ကေဘယ်တီဗွီတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
RSU-7 ကိုရုံး(၁) တွင် (၁.၁၁.၂၀၀၅) နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စီမံ/စီးပွား (ရုံး-၁)၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်(၁)၊ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရေး၊ RSU-8ကို ရုံး(၃)တွင် (၁.၁၁. ၂၀၀၅) နေ့၌၎င်း၊ RSU-11ကို ရုံး(၅) တွင် (၁.၁၁.၂၀၀၅) နေ့၌၎င်း၊ RSU-12 ကို ရုံး(၁၀) တွင် (၁.၁၁.၂၀၀၅) နေ့၌၎င်း၊ RSU-9 ကို ရုံး(၁၇) တွင် (၁.၁၂.၂၀၀၅) နေ့၌၎င်း၊ RSU-3 ကို ဇေယျသိဒ္ဓိရပ်ကွက်တွင် (၁.၁.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-4ကို ရုံး(၂၂)တွင် (၁.၅.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-5ကို ရုံး(၂၈)တွင် (၁.၅.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-6ကို ရုံး(၃၂)တွင် (၁.၅.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-10 ကို ရုံး(၂၆) တွင် (၁.၅.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-14 ကို သပြေကုန်း ရပ်ကွက်တွင် (၁.၅.၂၀၀၆)နေ့၌၎င်း၊ RSU-15 နှင့် RSU-16 ကို ဇေယျာသီရိမြို့နယ်တွင် (၁.၅. ၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-13 ခရေအိမ်ရာတွင် (၁.၈.၂၀၀၆) နေ့၌၎င်း၊ RSU-1 ကို သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်တွင် (၁.၈.၂၀၀၇) နေ့၌၎င်း တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ RSU-2 ကိုလွှတ်တော်၊ အိမ်တော်အတွက် ဇေယျာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်တွင် လျာထားသော်လည်း လွှတ်တော်၊ အိမ်တော်အတွက်သီးသန့်အိတ်ချိန်း တည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် စက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခြင်းမပြု လုပ်ခဲ့ပါ။
အင်တာနက်၊ အီးမေး၊ ဒေတာစနစ်ကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို အသုံးပြု ၍ ADSL စံနစ်ဖြင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရုံးအချင်းချင်း Data များ ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် Fiber Cable ချခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နေပြည်တော်တွင် ပထမဦးဆုံး ကေဘယ်လ်တီဗွီစနစ်ကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် အိတ်ချိန်းမှ သက်ဆိုင်ရာ RSU များသို့ Fiber Cable ဖြင့် Signal များပို့လွှတ်ပြီး သုံးစွဲမည့်နေရာများသို့ ထပ်ဆင့်ပို့လွှတ် ကြည့်ရှု့နိုင်ရန်အတွက် Fiber node များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် Amplifier များတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် CATV ကြည့်ရှု့မည့်အဆောက်အဦအတွင်း Indoor, Coaxial Cable များဖြင့် CATV point များ တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိ ကေဘယ်လ်တီဗွီစနစ်ကို အဆောက်အဦ (၂၆၇၀) လုံးတွင် ပွိုင့် ပေါင်း (၃၁၀၇၈) ပွိုင့် တပ်ဆင်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အော်တိုတယ်လီဖုန်းစနစ်ကို ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့်(၂၀၀၇-၂၀၀၈) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုးချဲ့ရုံး (၇)ရုံး (ရုံးအမှတ် ၃၉, ၄၀, ၄၁, ၄၂, ၄၃, ၄၄, ၄၅)နှင့် တိုးချဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(2u3s- ၅၀လုံး ၊ 16u4s (3 bed) - ၅၀ လုံး နှင့် (6u4s 2bed) ၄၅၀လုံး စုစုပေါင်းအိမ်ရာ ၅၅၀လုံး၊ ဒက္ခိဏသီရိ ဟိုတယ်ဇုံ၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံ၊ အဆောက်အဦ A, B1, B2, B3 နှင့် သီးခြား အဆောက်အဦများဖြစ်သော မီးသတ်၊ အိုးအိမ်၊ ရဲစခန်း၊ စာတိုက်ကြီး၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကျောင်းများ၊ မြို့တော်စည်ပင်အိမ်ရာများတွင် Copper Cable နှင့် Fiber Cable များကို မြေပေါ်၊ မြေအောက်ချခင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရုံးများအတွင်း Telephone တပ်ဆင်ရန် Telephone Indoor Cable တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေတာစနစ်ကို ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့်၂၀၀၇-၂၀၀၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုးချဲ့ရုံး(၇)ရုံး (ရုံးအမှတ် ၃၉, ၄၀, ၄၁, ၄၂, ၄၃, ၄၄, ၄၅) တို့တွင် Fiber Cable ဖြင့်အင်တာနက် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး တိုးချဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (2u3s- ၅၀လုံး ၊ 16u4s(3 bed)-၅၀လုံး နှင့် (6u4s 2bed) ၄၅၀လုံး စုစုပေါင်း အိမ်ရာ ၅၅၀လုံးတို့တွင် ADSL စံနစ်ဖြင့် အင်တာနက်လိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါ သည်။မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်များတွင် ADSL အင်တာနက်စနစ်ကို (၃/၂၀၁၇) အထိ လိုင်းအင်အား အရေအတွက် ၁၆၇၀ လိုင်း တပ်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
CATV စနစ်ကိုဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးများသို့ Fiber Cable ဖြင့် Signal များ ပို့လွှတ်ပြီး သုံးစွဲမည့်နေရာများသို့ ထပ်ဆင့်ပို့လွှတ် ကြည့်ရှု့နိုင်ရန်အတွက် Fiber node များတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် Amplifier များ တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် CATV ကြည့်ရှု့မည့် အဆောက်အဦ အတွင်း Indoor, Coaxial Cable များဖြင့် CATV point များတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အော်တိုတယ်လီဖုန်းစနစ်ကို တတိယအဆင့်အနေဖြင့် RSU -17 ကို (၁.၁.၂၀၀၉) နေ့တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့သစ်တွင်၎င်း၊ RSU -18 ကို (၁.၃.၂၀၀၉)တွင် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၃၆) တွင်၎င်း၊ RSU-19 ကို (၁.၃.၂၀၀၉)တွင် ဒက္ခိဏသီရိ မြို့သစ် ကြက်ခြေနီရုံးဝင်းအနီးတွင်၎င်း၊ RSU-20 ကို(၁.၈.၂၀၀၉)တွင် ပြည်တွင်းအခွန်ရုံး ရုံးအမှတ် (၄၆)တွင်၎င်း၊ RSU-21ကို (၁.၁၁.၂၀၀၉)တွင် လ.ဝ.ကရုံး ရုံးအမှတ် (၄၈) တွင်၎င်း၊ RSU-22 ကို (၁.၄.၂၀၁၀)တွင် သပြေကုန်းရပ်ကွက်အတွင်းတွင်၎င်း၊ RSU-23 ကို (၁.၇.၂၀၁၁)တွင် ဝန်ကြီးအိမ်ရာ အနီး ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် တွင်၎င်း၊ RSU-24 ကို (၁.၃.၂၀၁၃)တွင် ဒက္ခိဏသီရိ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနောက်တွင်၎င်း၊ RSU-25 ကို (၁.၅.၂၀၁၃) နေ့တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင်၎င်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ S-12 အိတ်ချိန်း(ပင်မ) နှင့် RSU များတွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား (၁၇၀၀၀) ကျော် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခု လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှ (၁၃၁၁၆) ဖြစ်ပါသည်။
ပုဗ္ဗသီရိ ZTE(ZXJ-10) အိတ်ချိန်း ၊ ပင်ပအိတ်ချိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သော RSU ကို (၁၁.၁၀.၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ ZTE(ZXJ-10) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ပင်ပအိတ်ချိန်းတွင် လိုင်းအင်အား ၂၅၀၀ ကျော် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၃၀၅ လိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပင်ပအိတ်ချိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သော RSU တွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား (၁၀၀၀) ကျော် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အား မှာ (၁၈၄) လိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒက္ခိဏသီရိ Main Exchange ကို (၁၅.၉.၂၀၁၁) တွင်၎င်း၊ ၄င်းအိတ်ချိန်း၏ RSU များဖြစ်သော အေလာလေဆိပ် RSU ကို (၄.၁၁.၂၀၁၁) နေ့တွင်၎င်း၊ ရွှေကြာပင် RSU 1 ကို (၁၀.၃.၂၀၁၂)နေ့ တွင် ၎င်း၊ သပြေကုန်းRSU ကို (၃.၁၂.၂၀၁၂) နေ့တွင် ၎င်း၊ ရွှေကြာပင် RSU2ကို (၁၆.၆.၂၀၁၃) နေ့တွင် ၎င်း၊ ခရေ RSU ကို (၁၀.၅.၂၀၁၃) နေ့တွင်၎င်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ RSU ကို (၁၀.၅.၂၀၁၃) နေ့တွင် ၎င်း၊ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ RSU 1 ကို (၁၀.၅.၂၀၁၃) နေ့ တွင်၎င်း၊ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ RSU2ကို (၁၀.၅.၂၀၁၃) နေ့တွင် ၎င်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စက်မှုဇုံ RSU ကို (၂၆.၃.၂၀၁၅) တွင် လည်းကောင်း အကွက်ကြီး - ၁ RSU ကို (၁.၆.၂၀၁၆) တွင် လည်းကောင်း အသီးသီးဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒက္ခိဏသီရိ Softswitch (CS – 15) အိတ်ချိန်းနှင့် RSU များတွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား (၇၂၀၀) ကျော် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ (၁၇၆၉) ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နေပြည်တော်တွင် Main Exchange (ပင်မ) (၃) ခု နှင့် RSU (၃၅) ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ကျည်တောင်ကန် လက်လှည့်အိတ်ချိန်းအစား လိုင်း (၂၅၀) TWD - 06 အိတ်ချိန်းကို (၁.၇.၂၀၁၃) နေ့ တွင် အစားထိုးတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ TWD-06 အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။လိုင်းအင်အား ၂၅၀ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အား မှာ ၉ လိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆင်ဖြူရှင်အိတ်ချိန်း KYEMILE (MSAN) (Form Mandalay) ကို (၃၁.၃.၂၀၁၅) တွင် စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ KYEMILE(MSAN) အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
လိုင်းအင်အား ၂၅၀ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၇ လိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပုဗ္ဗသီရိ ZTE(ZXJ-10) အိတ်ချိန်းနှင့် RSU များတွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား ၄၅၀၀ ကျော် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၅၀၅ လိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
လွှတ်တော် (၁) လိုင်း (၁၀၀၀) ပါ DMS 10i အိတ်ချိန်းကို (၂၀.၁.၂၀၁၁) ရက်နေ့၌၎င်း၊ လွှတ်တော် (၂) လိုင်း (၅၀၀) ပါ TDA-600 အိတ်ချိန်းကို (၁၄.၁.၂၀၁၁) ရက်နေ့၌၎င်း၊ အိမ်တော်(၁) လိုင်း (၁၀၀၀) ပါDMS10i အိတ်ချိန်းကို(၂၂.၁၂.၂၀၁၀)ရက်နေ့၌၎င်း၊ အိမ်တော် (၂) လိုင်း(၅၀၀) ပါ TDA-600 အိတ်ချိန်းကို (၃၀.၁၂.၂၀၁၀) ရက်နေ့၌၎င်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့အသံနှင့် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် နိုင်ရေးအတွက် ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထရန်စမစ်ရှင်းစက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်ဖြင့် မဲပေးနိုင်သည့် e-voting စနစ်ကို လည်းကောင်း၊ ဖိုင်ဘာ အင်တာနက်စနစ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကေဘယ်လ်တီဗွီစနစ်ကိုလည်းကောင်း တပ်ဆင် ပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။
(၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ဇမ္ဗူသီရိအားကစားရွာတွင် လိုင်း(၁၀၀၀)ပါ Softswitch RSU တစ်လုံး၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအား ကစားကွင်းတွင် လိုင်း(၅၀၀)ပါ Softswitch RSU တစ်လုံးနှင့် ဇေယျာသီရိအားကစားကွင်းတွင် လိုင်း(၂၄၀) ပါ FXO/FXS တစ်လုံး တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားရွာရှိ အဆောက်အဦ(၁၀၀) ပါCluster (၁၀)ခု၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစား ကွင်း အတွင်းရှိ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အားကစားရုံ (ဘောလုံးကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ Indoor Stadium၊ Multi Hall၊ ဘိလိယက်စနူကာကွင်း၊ Social Zone၊ ကျောက်ဒိုးရုံ) များ၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ မြင်းစီးကွင်း၊ BMX ကွင်း၊ Royalဂေါက်ကွင်းနှင့်စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့် ဇမ္ဗူသီရိဟိုတယ်များ၊ ဇေယျာသီရိ အားကစားကွင်း အတွင်းရှိ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အားကစားရုံ (ဘောလုံးကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ Indoor Stadium)များ၊ နေပြည်တော် အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့် နေရာအသီးသီးမှ IBC (International Broadcasting Center) (မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ) သို့ ဖိုင်ဘာ၊ ကော့ပါး ကေဘယ်လ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ နှင့် လှေပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် ငလိုက်ဆည်သို့ ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်သွယ်တန်း ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေတာ (Internet)တပ်ဆင် ခြင်းလုပ်ငန်း၊ LTE (Long Term Evoluation )စနစ်၊ WiFi စနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် Cable TV တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးများတွင် ဆက်သွယ်ရေးဆပ်ကော်မတီမှ လိုင်း(၁၀၀၀)ပါ Soft Switch အိတ်ချိန်းနှင့် လိုင်း(၁၅၀၀)ပါSoft Switch အိတ်ချိန်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဧည့်ဂေဟာတစ်ခုလျှင် တယ်လီဖုန်းလိုင်း (၅၀) တပ်ဆင်မည့် ကော့ပါးကေဘယ်များနှင့် MICC.1 အတွက်တယ်လီဖုန်းလိုင်း(၃၀၀) တပ်ဆင် နိုင်မည့် ကော့ပါးကေဘယ်များကို သက်ဆိုင်ရာ RSU မှ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာဧရိယာတွင် Outdoor Coverage အတွက် UMTS (3G) စခန်း(၃)ခုနှင့် LTE (4G) စခန်း(၁)ခုတပ်ဆင်ခြင်း၊ အင်တာနာချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရန် Main ISP တစ်လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊ Wireless Broadband data စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Wi-Fi Access Point စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အာဆီယံ အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်အတွင်း Administrative/ Security Management ပြုလုပ်ရာတွင် Hand held များအသုံးပြု၍ Point to Point ဆက်သွယ်နိုင်ရေး အတွက် Two-way Trunk Radio စနစ်ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားတွင်လည်းဖိုင်ဘာကေဘယ်လ် Optical Termination Box တပ်ဆင်ခြင်း၊ (၁၆) လိုင်းပါ တယ်လီဖုန်း Media Converter တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဒေတာ(အင်တာနက်) စက်ပစ္စည်း၊ WiFi စက်ပစ္စည်း များတပ်ဆင်ခြင်း၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ် ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့နေ ပြည်သူအများဆက်သွယ်မှု ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် (၁၉၆၄)ခုနှစ်တွင် လိုင်း (၁၅၀) လက်လှည့် အိတ်ချိန်းအားဗိုလ်တောက်ထိန်လမ်း(ယခုစာတိုက်ဝင်း)တွင် စတင်တပ်ဆင်အသုံး ပြုခဲ့ပါသည်။ (၁၉၆၄)ခုနှစ် လယ်ဝေးလမ်းဟောင်း (ယခုပျဉ်းမနားပင်မအိတ်ချိန်း) နေရာတွင် လိုင်း (၅၀၀) TMX- 10 Digital အိတ်ချိန်းဖြင့် 21xxx တယ်လီဖုန်းအမှတ်များအသုံးပြု၍ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ပျဉ်းမနားနယ်မြေအတွင်းရှိ လယ်ဝေးမြို့၊ အေလာမြို့၊ သာဝတ္ထိမြို့၊ တပ်ကုန်မြို့၊ ရမည်းသင်းမြို့၊ ပျော်ဘွယ်မြို့၊ ကျည်တောင်ကန်မြို့များရှိ ပြည်သူများ ဆက်သွယ်မှုရရှိစေရန် လက်လှည့် အိတ်ချိန်းများအား Micro Ring Down Line များအသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၀၄)ခုနှစ်တွင် လိုင်း(၃၀၀၀) Trunk DMS-100 Local–Transit Ex; ဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ပျဉ်းမနား (ပင်မ) အိတ်ချိန်း၏Remoteများအနေဖြင့် လယ်ဝေးမြို့တွင်လက်လှည့် အိတ်ချိန်းအစား Unirem-512 Ex; ဖြင့်၎င်း၊ ပေါင်းလောင်းနှင့်စာတိုက်တို့တွင် Unirem-512Ex; တစ်လုံးစီဖြင့်၎င်းတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင် တပ်ကုန်းမြို့လက်လှည့် အိတ်ချိန်းအစားလိုင်း(၁၀၀၀) KY-100 အိတ်ချိန်း ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။(၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင် ပြန်ကပြေးကျေးရွာနှင့် လမ်းပျဉ်းမနား ကျေးရွာ တို့တွင် လက်လှည့်အိတ်ချိန်းများ ဖြင့်၎င်း၊ အေလာလေဆိပ်၊ သတင်းစာတိုက်၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဝင်း International Gate Way နှင့် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားဝင်းအတွင်းတို့တွင် PABX အိတ်ချိန်းများဖြင့် ၎င်းတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၀၆)ခုနှစ်တွင် ဘောဂသီရိဝင်းအတွင်း လိုင်း(၃၀၀) PABX ဖြင့်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင် လယ်ဝေး မြို့ရှိ Unirem-512 Ex; အိတ်ချိန်းအား ပျဉ်းမနား(ပေါင်းလောင်း)သို့ ပြောင်းရွှေ့၍ လိုင်း(၁၀၀၀) KY-100 အိတ်ချိန်းဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြည်စံအောင် စံပြကျေးရွာတွင် လိုင်း(၂၅၀) JSY-2000 အိတ်ချိန်းဖြင့်၎င်း၊ တိရိစ္ဆာန်ဥယျဉ်ဝင်းအတွင်း PABX အိတ်ချိန်းဖြင့်၎င်း တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား(ပင်မ)အိတ်ချိန်းအားလိုင်း(၆၄၀) ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။(၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် စာတိုက်အိတ်ချိန်း Unirem-512 Ex; အား ဘောဂသီရိဝင်းအတွင်း ပြောင်းရွှေ့ တပ်ဆင်၍ စာတိုက်တွင်လိုင်း(၁၀၀) TL-6500 အိတ်ချိန်းဖြင့်အစားထိုး တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ပေါင်းလောင်းတွင် TL-6500 အိတ်ချိန်း ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။ ဘောဂသီရိဝင်းမှ PABX အိတ်ချိန်းအား အာဟာရသုခ စျေးသို့ ပြောင်းရွှေ့တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင် သာဝတ္ထိလက်လှည့် အိတ်ချိန်းအစားလိုင်း (၃၀၀) TWD-02 Ex; ဖြင့်၎င်း၊ အေလာလက်လှည့်အိတ်ချိန်းအစားလိုင်း (၅၀၀) TWD-02 Ex; ဖြင့် ၎င်း ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၁၀)ခုနှစ်၌ ဘောဂသီရိဝင်းတွင် TL-6500 အိတ်ချိန်းဖြင့် လိုင်း(၂၀၀)ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီး တပ်ကုန်းမြို့တွင် လိုင်း (၂၀၀) ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၁) ခုနှစ်တွင် ပြန်ကပြေး လက်လှည့် အိတ်ချိန်း အား လိုင်း (၅၀၀)TL-6500Ex;ဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းပြောင်းရွှေ့တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် အဟာရသုခစျေးPABX အိတ်ချိန်းအား လိုင်း (၃၀၀) TWD-06 အိတ်ချိန်းဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ပေးခဲ့ပါသည်။
တပ်ကုန်းမြို့နေ ပြည်သူအများဆက်သွယ်မှုရရှိစေနိုင်ရန်အတွက်(၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင်လက် လှည့် လိုင်း (၁၇) လိုင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး (၁၉၉၀)ခုနှစ်တွင် လက်လှည့်လိုင်း(၃၈၃)လိုင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လက်လှည့်အိတ်ချိန်းကို တပ်ကုန်းမြို့မြဝတီရပ်ကွက် စည်ပင်လမ်း (ယခုစာတိုက်ဝင်း) အတွင်း တပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
တပ်ကုန်းမြို့မှ အခြားမြို့နယ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုရရှိစေရန်အတွက် တပ်ကုန်း MICRO Ring Down Line များအသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။ (၁.၈.၂၀၀၆)ခုနှစ်တွင် လိုင်း(၁၀၀၀) ဖြင့် လက်လှည့် အိတ်ချိန်းအစား အော်တို KY 1000 Xm Fisca Ex ဖြင့် လက်လှည့်အိတ်ချိန်းအစား အော်တိုအိတ်ချိန်းဖြင့်ယခုမိုက္ကရိုဝန်းအတွင်းအစားထိုးတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်စံအောင်စံပြကျေးရွာအတွက် လိုင်း(၂၅၀) အိတ်ချိန်းအား (၁၆.၃.၂၀၀၈) နေ့တွင် တပ်ဆင် ပေးခဲ့ပါသည်။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် လူဦးရေထူထပ်လာခြင်း ၊ အစိုးရရုံးများတွင် ဝန်ထမ်း ဦးရေ များပြားလာခြင်း တို့ကြောင့် (၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင် လိုင်း(၂၀၀)ထပ်မံတိုးချဲ့ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူစေရန်အတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ (၂၀၀၈)ခုနှစ်အတွင်း CDMA-450 တပ်ဆင်ခြင်း၊ (၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင် GSM ဖုန်းများ တပ်ဆင်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီ ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ပြည်စံအောင် အိတ်ချိန်းကို (၁.၁၀.၂၀၁၆) တွင် MSAN အိတ်ချိန်းဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ S – 12 အိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းရှိ RSU – 1, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 24 တို့နှင့် ရုံးအမှတ် (၁၈)၊ တပ်ကုန်းအိတ်ချိန်းတို့တွင် MSAN စက်များဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်တွင် GSM စခန်း (၃၉) ခု၊ ဒက္ခိဏ သီရိမြို့နယ်တွင် GSM စခန်း (၁၃) ခု ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် GSM စခန်း (၅၈) ခု ၊ လယ်ဝေး မြို့နယ်တွင် GSM စခန်း (၄၁) ခု ဇေယျာသီရိမြို့နယ်တွင် GSM စခန်း(၁၀) ခု၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်တွင် GSM စခန်း(၁၁) ခု၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် GSMစခန်း (၁၉) ခု ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် GSMစခန်း (၂၉) ခု ပင်လောင်းတွင် GSM စခန်း (၂) ခု နှင့် သာ၀တ္ထိတွင် GSM စခန်း (၂) ခု စုစုပေါင်း GSM စခန်း (၂၂၄) ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆောင်ရွက်သော CDMA 800MHz Mobile BTS စခန်း(၃၉) ခု ကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါ သည်။
နေပြည်တော်တွင် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများကို GSM (၂၅၇,၀၇၈) လုံး၊ WCDMA (၂,၀၁၂,၅၇၂) လုံး ၊ CDMA-450 (၁၅၅,၉၇၂) လုံး ၊ MPT CDMA-800 (၃,၅၃၄) လုံး နှင့် MEC CDMA-800 (၁၃၁,၅၀၀) လုံး စုစုပေါင်း(၂,၅၆၀,၆၅၆) လုံး ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပုဗ္ဗသီရိ ZTE(ZXJ-10)အိတ်ချိန်း သမိုင်းကြောင်း
ပုဗ္ဗသီရိ ZTE(ZXJ-10)အိတ်ချိန်း၊ ပင်မအိတ်ချိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သော RSUကို (၁၀.၁၀.၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာZTE(ZXJ-10) အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပင်မအိတ်ချိန်းတွင် လိုင်းအင်အား ၂၅၀၀ ကျော် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၃၀၅ လိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျည်တောင်ကန် TWD-06 အိတ်ချိန်းကို (၁.၇.၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ လိုင်းအင်အား ၂၅၀ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၉ လိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆင်ဖြူရှင်အိတ်ချိန်း KYEMILE(MSAN)(From Mandalay)ကို (၃၁.၃.၂၀၁၅)တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ KYEMILE(MSAN)အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ လိုင်းအင်အား ၂၅၀ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၇ လိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုဗ္ဗသီရိ ZTE(ZXJ-10)အိတ်ချိန်းနှင့် RSUများတွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား ၄၅၀၀ ကျော် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ ၅၀၅ ဖြစ်ပါသည်။
ဒက္ခိဏသီရိ Softswitch(CS-l5) အိတ်ချိန်း သမိုင်းကြောင်း
ဒက္ခိဏသီရိ Softswitch(CS-l5) အိတ်ချိန်းအား ၁၅−၉−၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ Softswitch အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး CS-l5ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မအိတ်ချိန်းတွင် လိုင်းအင်းအား ၈၀၀တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ယင်းပင်မအိတ်ချိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ Remote Exchange(RSU-အေလာလေဆိပ်)အား စတင်တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် (RSU-ရွှေကြာပင် R.1,သပြေကုန်း)တို့အားလည်းကောင်း ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် (RSU-ရွှေကြာပင် R.2,ခရေ,အားကစားရွာ,နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာ,သံတမန်ဇုံ)တို့အား လည်းကောင်း စက်မှုဇုံ RSUကို ၂၆−၃−၂၀၁၅တွင်လည်ကောင်း အကွက်ကြီး−၁RSUကို (၁−၆−၂၀၁၆)တွင် လည်းကောင်း အသီးသီးဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Softswitch(CS-l5)အိတ်ချိန်းနှင့် RSUများတွင် စုစုပေါင်း လိုင်းအင်အား(၇၂၀၀)ကျော် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်းအားမှာ (၁၇၆၉)ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT)က ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ပြည်စံအောင် အိတ်ချိန်းကို (၁−၁၀−၂၀၁၆)တွင် MSAN အိတ်ချိန်းဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ S-12 အိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းရှိ RSU-1,3,5,6,13,14,17,22,24တို့နှင့် ရုံးအမှတ်(၁၈)၊တပ်ကုန်းအိတ်ချိန်းတို့တွင် MSANစက်များဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နေပြည်တော်(s-12)အိတ်ချိန်းအား (၁၅−၉−၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်ချိန်းအမျိုးအစားမှာ Alcatel S12 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး CHB2 Version ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မအိတ်ချိန်းတွင် လိုင်အင်အား ၂၃၀၀ ကျော် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပင်မအိတ်ချိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ Remote Exchange (RSU-7,8,9,11,12) တို့အား ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင် စတင်တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် (RSU-3,4,5,6,10,13,14,15,16) တို့အား အိမ်ရာများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင်လည်းကောင်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် (RSU-1)အား လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် (RSU-17,18,19,20,21)တို့အားလည်းကောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် (RSU-22)အား လည်ကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် RSU-23 အား လည်ကောင်း၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် RSU-24,25 တို့အားလည်းကောင်း အသီးသီးဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ S-12အိတ်ချိန်းနှင့် RSUများတွင် စုစုပေါင်းလိုင်းအင်အား (၁၇၀၀၀)ကျော် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော လိုင်းအင်အားမှာ(၁၃၁၁၆) ဖြစ်ပါသည်။
၁ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၁၄၉ ၁၃၇ ၁၂
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ လက်အောက်ခံဌာနအသီးသီး၏ ရုံးဓါတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ
Nay Pyi Taw S-12 Main Exchange
စဉ် ရုံးအမည် ရုံးလိပ်စာ ရုံးဖုန်းနံပါတ် နှင့် Fax မှတ်ချက်
၁ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံးခန်း ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-501999
၂ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး(စီမံရေးရာ) ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-500100/500113
၃ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး(ငွေစာရင်း) ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-501104
၄ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး(စီးပွားဌာန) ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-500500/500400
၅ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး(ADSL ဌာန) ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-500112
၆ ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်း ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပုဗ္ဗသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-500000/500555
၇ လွှတ်တော်/အိမ်တော်အိတ်ချိန်း လွှတ်တော်ဝန်းအတွင်း၊လွှတ်တော်အိတ်ချိန်းရုံး 067-590444/590111
၈ S - 12 အိတ်ချိန်း ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ၊ S - 12 အိတ်ချိန်းရုံး 067-422222/420015
၉ ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်း ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-8100111/8100222
၁၀ လယ်ဝေးအိတ်ချိန်း အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ရန်အောင်လမ်း၊
လယ်ဝေးမြို့နယ် ၊လယ်ဝေးအိတ်ချိန်းရုံး 067-30000/30222
၁၁ တပ်ကုန်းအိတ်ချိန်း လမ်းမတော် မြဝတီ၊
တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊ တပ်ကုန်းအိတ်ချိန်းရုံး 067-70222/703333
၁၂ သာ၀တ္ထိအိတ်ချိန်း လယ်ဝေးမြို့နယ် ၊သာ၀တ္ထိအိတ်ချိန်းရုံး 067-65000/65111
၁၃ အေလာအိတ်ချိန်း လယ်ဝေးမြို့နယ်၊အေလာအိတ်ချိန်းရုံး 067-60111/60222
၁၄ ပြည်စံအောင်အိတ်ချိန်း တပ်ကုန်းမြို့နယ် ၊လယ်ဝေးအိတ်ချိန်းရုံး 067-99850000
၁၅ ပျဉ်းမနားအိတ်ချိန်း "လယ်ဝေးလမ်းဟောင်း၊ရန်အောင် (၂) ရပ်ကွက်၊
ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ပျဉ်းမနားအိတ်ချိန်းရုံး" 067-22222/21888
၁၆ ပေါင်းလောင်းအိတ်ချိန်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ ပေါင်းလောင်းအိတ်ချိန်းရုံး 067-21555
၁၇ ဘောဂသီရိကားကြီး၀င်းအိတ်ချိန်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ဘောဂသီရိကားကြီး၀င်းအိတ်ချိန်း 067-26111
၁၈ ပျဉ်းမနားစာတိုက်အိတ်ချိန်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ပျဉ်းမနားစာတိုက်အိတ်ချိန်း 067-22092
၁၉ ရအာဟာရသုခစျေးအိတ်ချိန်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊အာဟာရသုခစျေးအိတ်ချိန်း 067-38111/38000
၂၀ နေပြည်တော်ကောင်စီအိတ်ချိန်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊နေပြည်တော်ကောင်စီ၀န်းရုံး 067-550000
၂၁ အိုင်တီဌာန ရဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-420215/420006
၂၂ မိုဘိုင်းဌာန ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-8100115/8100600
၂၃ အဝေးဆက်ဌာန ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-8100678
၂၄ ပြည်ပဆက်ဌာန ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ၊ဒက္ခိဏသီရိအိတ်ချိန်းရုံး 067-8100202/8100201